လူတော်တော်များများက ဒီလို Signs ကို အစားမှားတာလား၊အ…
တခြားနေရာတွေထက်ပိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်တဲ့ နေရာ ၅ ခု…!
တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးဟာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ကြဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့် နေရာတွေကတော့ ပိုမိုပြီးသတိထားပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ နေရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အများစုဟာ ဆံပင်တွေကိုသာ ခေါင်းလျှော်သန့်ရှင်းပြုလုပ်ကြပေမယ့် ဦးရေပြားသန့်ရှင်းရေးကိုတော့ မေ့လျော့နေတတ် ကြပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဆံသားတွေကိုသာမက ဦးရေပြားကိုပါ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ထိတွေ့ပွတ်တိုက်ပေးပြီး နှိပ်နယ်ပေးသင့်ပါတယ်။
လျှာဟာ ရေမြှုပ်တခုလိုပဲ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ အရည်တွေကို ထိတွေ့စုပ်ယူနေရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်တာကြောင့် သွားတွေကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သလိုပဲ လျှာကိုလည်း သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးဖို့ဟာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ သွားတိုက်တံလိုပဲ လျှာခြစ်တံတွေလည်း အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့် လျှာခြစ်တံတွေကို အသုံးပြုပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ရေချိုးသန့်စင်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာ ဆပ်ပြာတိုက်သန့်ရှင်းပြုလုပ်တတ်ကြပေမယ့် ခြေထောက်တွေကိုတော့ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ဖို့ မေ့လျော့တတ်ကြပါတ…
ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ပါ။ ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ဒေါက်တာ Gupta က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့် သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့။ ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ။ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ။ ၁လ ကနေ သုံးလခန့် သော်ပေးပါ Maryland College of Medicine ရဲ့ Research အရအဲလိုသောက်ပေးတာက ကင်ဆာဆဲလ်ကို ဓာတ်ကင်ကုသတာထက် အဆတစ်ထောင်ကောင်းတယ်တဲ့ ။ တတိယအဆင့်က အုန်းဆီစစ်စစ် သုံးဇွန်းကို မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ သောက်ပေးပါ။ ကင်ဆာဆဲလ် အလိုလို ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကုသနည်း နှစ်ခုကို သကြားလုံးဝရှောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ဖိုသီဖတ်သီနေရင်တော့ ကင်ဆာဆဲလ်က သင့်ကို အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆေးနည်းက ကျွန်တော် ဖြန့်ဝေနေတာ ငါးနှစ်ရှိသွားပါပြီ။ ဒါဆေးနည်းက ကင်ဆာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတော့မဲ့ သူတွေအတွက် အလွန်အကျိုးရှိမှာပါတခြားသူတွေ သိအောင်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ
Dr. Gupta says, No one must die of cancer except out of carelessness; (1). First st…
(၁) ဒန့်သလွန် ရွက် ဟင်းချိုချက်သောက်ခြင်း၊ကြော်စားခြင်းဖြင့်အစာကြေစေသည်။သွေးတိုးအမူးရောဂါသက်သာစေသည်။ (၂) ဒန့်သလွန်ရွက်အစိမ်းကိုထောင်းအရည်ညှစ်ဆားအနည်းငယ်ခပ်၍တိုက်လျှင်ချောင်းဆိုး။ကိုယ်ပူ အဖျားရောဂါသက်သာစေသည်။ (၃) ဒန့်သလွန်ရွက်သတ္တုရည်ကိုမျက်စဉ်းခပ်ပေးလျှင်ခေါင်းကြီးကိုက်ရောဂါသက်သာစေသည်။ (၄) ဒန့်သလွန်သီးမီးဖုတ် အတွင်းမှအစေ့နှင့်အသားကိုခြစ်ယူပြီး ကြက်ဥနှင့်ရောကြော်စားသော်သွေးဝမ်း။လိပ်ခေါင်းသွေးကျရောဂါသက်သာစေသည် (၅) ဒန့်သလွန်သီးအရင့်ကိုနေခြောက်လှန်း အစေ့ခြောက်ကိုဖန်ပုလင်းဖြင့်သိမ်းထားပါ။ သွေးတိုးလျှင်နှစ်စေ့။သုံးစေ့ဝါးစားပါ။ရေအဝသောက်ပါနာရီဝက် အတွင်းသွေးတိုးကျပါသည်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိလျှင် အစေ့ခြောက်ကိုအမှုန့်ထောင်းပြီးပျားရည်နှင့်နေ့စဉ် ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့်စားပါ။ရင်ကြပ်၊သွေးတိုး၊နှလုံးမောရောဂါရှိလျှင် ဒန့်သလွန်သီးအစေ့အခြောက်အမှုန့်နှင့် ချင်း(ဂျင်း)ခြောက်မှုန့်ဆတူရောစပ်ပြီးရေနွေးနှင့်သောက်ပါ။ဒန့်သလွန်သီးအစေ့ခြောက်ကိုနေလှန်းပြီး သိမ်းထားလျှင်နှစ်ကြာသည်အထိအာနိသင်မပျက်စီးပါ။ Credit:ကျန်းမာရေးအထွေထွေဗဟုသုတ
သွေးတိုးရောဂါသည်ကမ္ဘာတစ်လွှား အဖြစ်များသော ရောဂါများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်အရ သွေးပေါင်ချိန်၁၃၀/၈၀ နှင့်အထက်ကို သွေးတိုးပြီဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ သွေးတိုးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများမှာလည်း များပြားလှပါသည်။ သွေးတိုး၏လက္ခဏာများ သွေးတိုးရောဂါသည်မည်သည့်လက္ခဏာမှမပြဘဲရှိနေတတ်သော အသံတိတ် လူသတ်သမားတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ သွေးတိုးလာလျှင်ခေါင်းမူးသည်ခေါင်းကိုက်သည်ဟု ပြောလေ့ရှိကြသော်လည်း ထိုလက္ခဏာများသည် သွေးတိုးရှိတိုင်း ပေါ်လေ့ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချို့ဆိုလျှင်သွေးတိုးရှိလို့ရှိမှန်းပင်မသိဘဲ သွေးတိုး၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတစ်ခုခုပေါ်မှ သိကြသည်လည်းရှိသည်။ သွေးတိုးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲများ သွေးတိုးရောဂါသည်အလွန်ဆိုးသော ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွေးတိုးရောဂါကို သေချာမထိန်းမိလျှင်ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေး အရမ်းတိုး၍ သတိလစ်ခြင်း၊ နှလုံးကြီးခြင်း၊ နှလုံးအားနည်းခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောနှင့်တခြားသွေးကြောများ ပိတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်း၊ မျက်စိထိခိုက်ခြင်း စသည့်နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ များပြားလှပါသည်။ ခေါင်းမူးမှ သွေးတိုးတာလား အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သလိုအများစုသည် ခေါင်းမူးမှသွေးတ…
ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မိနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း
ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မီးနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်းအကြောင်းလေး ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆီးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဆီးပူ ဆီးနီ ဆီးအောင့် ဆီးကျန် ဆီးသွေးပါ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း နှင့် အခြားသော ဆီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက် သဘာဝဆေးနည်းတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့်.. နာနတ်ရွက်ပြုတ်သောက်ခြင်း လက်ဖက်ခြောက်ရေစိမ်သောက်ခြင်း ဆီးခုံပေါ်သို့ရေခဲတုံးဖိ့ကပ်ပေးခြင်း ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းချို ချက်သောက်ခြင်း သကြားကို ရေစိမ်သောက်ခြင်း ဆန်ဆေးရေကိုသောက်ခြင်း နှင့် အခြားသော သဘာဝဆေးနည်းတွေအများအပြားရှိပါတယ်။ ဆီးရောဂါနဲ့ပတ်သက်လာရင် အထက်ပါဖော်ပြပေးထားတဲ့ သဘာဝဆေးနည်းများထက် (၅)မီးနစ်အတွင်း ဆီးရောဂါအားလုံးကို ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်းရှိပါတယ်။ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်… ကြက်သွန်နီ ဥကြီး (၁)လုံးကို အခွံခွာ၍ မလှီးဖြတ်မှီ ရေစင်အောင်ဆေးကြောပြီး ပါးပါးလှီးကာ ရေကျက်အေး(သို့)ရေသန့်သန့်ထဲကိုထည့်၍ သကြား လက်ဖက်စားဇွန်း(၃)ဇွန်းခန့်ဖြင့်ရောစပ်ပြီး အဖုံးအုပ်၍ တစ်နာရီခန့် စိမ်ထားပါ။ ရေကို ကြက်သွန်ဖတ်များ မြုပ်အောင်ထည့်ပါ။များများ သောက်ချင်ပါက ကြက်သွန်နီများများ သကြားအချိုးကျထည့်၍ ရေထပ်တိုးပြီးထည့်ပါ။ တစ်န…
သင်.. လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးပါသလား…. အရေးကြီးတယ်နော်။လက်ဆစ်ချိုးတာက လက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ပြောစမှတ် တစ်ခုရှိပါတယ်။လက်ဆစ်ချိုးရာမှ ထွက်လာတဲ့အသံက သင့်အတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါသလား။ အဆစ်အမြစ်တွေဟာ လက်တွေ လှုပ်ရှားတဲ့အခါအရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပွတ်တိုက်မှု လျှော့နည်းစေတဲ့အရည်တစ်မျိုး synovial fluid ရှိရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ဂတ်စ် (အောက်စီဂျင်၊ နှိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) တွေ ပါဝင်ပါတယ်။လက်ဆစ်ကို ဖောက်ခနဲမြည်အောင် ချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား နေရာဟစေပါတယ်။ပိုဟလာတဲ့ နေရာလပ်က synovial fluid စုပ်ယူပေးတဲ့ ဖိအား၊ တွန်းအား ဖြစ်စေပါတယ်။ လေပူဖောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်တယ်။ နောက် အဲဒီလေပူပေါင်းတွေ ပေါက်လို့ အသံကြားနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးအဆစ်နေရာ အပြင်ဘက် သီးခြားစီကွဲနေတဲ့အခါ ပိုကျယ်လာတဲ့အဆစ်အမြစ်နေရာမှာ ပြန် ဖြည့်ဖို့ အရည်ထပ်မရနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းပေါက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အဲဒါက အသံဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာဖြစ်ကြောင်းUniversity of Alberta ရဲ့ ဦးစီးသုတေသီ Gregory Kawchuk က ဆိုပါတယ…